IoT Botnets - Tilmaame Tijaabada ah sida loo ilaaliyo Kombiyuutarkaaga
Shaki kuma jiro, Zeus, Tigerbot, iyo Droid Dream waa kuwa ugu caansan ee baaskiiladaha mobile kuwaas oo qabanaya hawshooda iyo burburinta goobaha kale maalin kasta. Si kastaba ha ahaatee, soo ifbaxidda IoT waxay noqotay dhacdo dhab ah oo ka jirta dhulka botnet, taasoo saameeysay qalab badan oo adduunka ah. Nabadgelyada Internetka (IoT) waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee maalmahan. Horumarinta Boostada IoT waa arimaha gubanaya ee nabadgelyada. Botnet kale waa inaan ka hadalnaa waa Mirae botnet oo bilaabay weeraro kala duwan oo DDoS ah - hosting para aplicaciones genexus. Waxay saameeysay tiro badan oo farsamo iyo kuwo aan farsamo ahayn. Qalabka IoT waxaa loo isticmaalaa ujeedooyin xirfadeed iyo kuwa aan xirfad laheyn. Waxay raacaan sharciyada adag ee adag, hase yeeshee, shaqadooda ma aha mid calaamad u ah.
Sidee loo ogaan karaa ugana hortagi karaa weerarada IOMT botnet?
Si fudud ayaad u ogaan kartaa ugana hortagi kartaa weerarrada IoT adoo raacaya qaababka soo socda ee ay bixiso Igor Gamanenko, oo ah Nidaamyada Macaamilka Maamulaha Guusha Guud:
Habka Nidaamka 1aad: Tallaabooyinka aasaasiga ah ee nabadgelyada:
Tani waa waqtigii aad si dhab ah u fekeri lahayd ogaanshaha iyo ka hortagga weerarada IOMT botnet. Talaabooyinka aasaasiga ah ee qawaaniinta maaha mid ku filan, taas macnaheedu waa inaad ka fikirto wax kale oo aan ahayn farsamooyinka dhaqameed..
Habka # 2: Farsamooyinka asaasiga ah iyo firfircoon:
Waxaa jira habab kala duwan oo farsamo iyo firfircoon oo lagu ogaanayo botnets iyo weerarada IoT. Hababka ogaanshaha habka loo yaqaan botnet ugu fiican waxay ku saleysan yihiin qiimeynta iyo falanqeynta socodka gaadiidka baaskiiladaha iyo qulqulka.
Habka # 3: Adeegyada HTTP:
Boorsooyinka ku xiran adeegyada HTTP ee hawshooda iyo isgaadhsiintoodu way adag tahay in la ogaado. Tani waa sababta oo ah xiriirka ka dhaxeeya botaniska iyo qaanadaha ayaa had iyo jeer ku jira habka loo qaabeeyey.
Habka # 4: Dadaallada Collective
Si looga hortago weerarrada botnet, waa inaad adigu kicisaa dadaalka wadajirka ee shirkadaha, khubarada amniga, shirkadaha wax soo saarka, diiwaannada domain, diiwaannada domain, bixiyeyaasha adeegga daruuriga ah, iyo shirkadaha fulinta sharciga gudaha iyo caalamiga
Habka Nidaamka 5: Farsamada isku xiran oo lagu hagaajinayo weerarrada botnet:
Isku-dubaridka iyo wadajirka ah ee aad u baahantahay inaad ogaato, ka-saarto, ogeysiiso, iyo dib-u-qaabaynta weerarka botnet ayaa ka fogaanaya shabakadaha iyo shaandhooyinka shaki laga galo. Wargelinta ku saabsan khadka-baarka ioT iyo shabakadda internetka waa dhammaan wixii aad u baahan tahay si aad uga badbaado online-ka. Waxaa intaa dheer, waa inaad ka warqabtaa hanjabaadaha internetka iyo khataraha si aad u caawin karto dadka kale. Waa in aad ogaataa oo aad ilaalisaa hanjabaadaha hoos yimaada kormeerka sarkaalka amniga internetka. Difaaca ayaa ah sida kaliya ee aad u ogaan karto weerarka IoT ee botnetka waxayna ka hor-tagi karaan inta badan.
Waa inaad marwalba xusuusataa inta uu socdo botnet iyo IoT, kombuyuutarku wuxuu ku dhacaa virus-yada faafinta spam iyo u dira emails phishing. Waxay ujeedadeedu tahay inay ku dabagasho dadka isticmaala si ay u riixdo xiriirka shakiga leh oo ay soo qaadaan faylasha qariibka ah.